“Ruuxii Galaa Abaal Mar Baa loo Gudaa.”.- Eric Bailly oo fariin qiiro leh u diray Macalinka la Ceyriyay ee Jose Mourinho – Gool FM
“Ruuxii Galaa Abaal Mar Baa loo Gudaa.”.- Eric Bailly oo fariin qiiro leh u diray Macalinka la Ceyriyay ee Jose Mourinho
(Manchester) 20 Dis 2018. Difaaca kooxda Manchester United Eric Bailly ayaa ku macsalaameeyay macalinkiisii hore Jose Mourinho fariin qiiro leh, taasoo uu u mariyay baraha bulshada, gaar ahaan boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka.
Manchester United ayaa Talaadadii ku dhawaaqday in ay shaqada ka raacdeysay Jose Mourinho, kadib natiijo xumi kooxda ay la kulantay xili ciyaareedkan.
Saraakiisha Red Devils ayaa waxay isla shalay ee Arbaco ah ku dhawaaqeen in halyeeygoodii hore ee Ole Gunnar Solskjær uu si ku meel gaar ah kooxda ku leylin doono ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan.
Jose Mourinho ayaa sabab buuxda u ahaa in Eric Bailly uu soo caga dhigto garoonka Old Trafford sanadkii 2016-kii, kadib markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda reer Spain ee Villarreal aduun dhan 38 milyan euro.
Inkastoo uu ciyaaryahanka daqiiqado badan ciyaarin bilihii ugu dambeeyay, sababa la xiriira khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo tababare Jose Mourinho, hadana Bailly ma uusan ilaabin abaalka uu u galay ninka reer Portugal.
“Wax walba oo ay dhahaan, mar walba waan u mahadcelinayaa qofka i siiyey fursad aan kaga ciyaaro kulankeygii ugu horeeyay ee garoonka Old Trafford”.
“Waad ku mahadsan tahay waxa aad i baratay, Nasiib wacan macalin”.
Lingard oo noqday laacibkii ugu horreeyay Man United ee Fariin u dira Jose Mourinho kaddib markii laga Ceyriyay Man United